संक्रमित अत्याधिक भएका ठाउँमा काठमाडौँ महानगरले अघि बढायो टोल-टोलमा परीक्षण, कहाँ कहाँ हुन्छ परिक्षण ? – Sapana Sanjal
संक्रमित अत्याधिक भएका ठाउँमा काठमाडौँ महानगरले अघि बढायो टोल-टोलमा परीक्षण, कहाँ कहाँ हुन्छ परिक्षण ?
May 19, 2021 91
Sapana Sanjal : काठमाडौ । महानगरको धेरै संक्रमित देखिएका ठाउँमा महानगरपालिकाले टोल टोलमै परिक्षण गर्ने भएको छ । धेरै सङ्क्रमित भएका असन, डिल्लीबजार न्युरोड, बालुवाटार र कोटेश्वरमा परीक्षण गरिने छ भने भक्तपुरको भक्तपुर दरबार स्क्वायर, ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरलगायतका स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहकार्यमा एन्टिजेन परीक्षण हुनेछ ।
कामपाको ३२ वडाबाट मात्रै अहिले हरेक दिन ६०० जनाको परीक्षण हुने गरेको र परीक्षण गरिएकामध्ये ४२० जनामा पुष्टि हुने गरेको कामपा जनस्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । कामपाका ल्याव टेक्निसियन राधिका कुँइकेलका अनुसार परीक्षणका लागि आवश्यकता अनुरूप टोली तयारी अवस्थामा रहेको छ । “ शङ्का देखिएका र वडाले खटाएअनुसार अहिले परीक्षणको कामलाई व्यापक बनाइएको छ”, कुँइकेलले बताए ।
परीक्षण मात्रै होइन, परीक्षणका क्रममा समस्या बढी भएका बिरामीका लागि एम्बुलेन्समा राखी अस्पतालसम्म लाने र ल्याउने व्यवस्थासम्म कामपाले नै गर्दै आएको छ । यसका लागि नागरिकले पैसा तिर्नु पर्दैन । यसरी पोजिटिभ भएका बिरामीका लागि एम्बुलेन्ससँग कामपाले दुई हप्ताअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ । यस किसिमको परीक्षण १० हजार जनामा गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
Prevअक्सिजन लिएर आउने बिरामीको मात्र उपचार गर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्दै सरकार